किन भारतको कुनै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध छैन ? - Kantipath.com
दक्षिण एशियाली मुलुक भारत क्षेत्रफल र जनसंख्याका हिसाबले यो क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो मुलुक हो। २०१४ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका भाजपा नेता नरेन्द्र मोदीले ‘छिमेक पहिला’ नीति ल्याए। उनको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा दक्षिण एशियाली मुलुकमा सरकार प्रमुख तथा राष्ट्र प्रमुखलाई दिल्ली बोलाइएको थियो। मोदी २०२० मा फेरि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए। यो पटकको शपथ ग्रहणमाा भने विदेशी पाहुना दिल्ली पुगेनन्। कारण स्पष्ट छ मोदीको छिमेक पहिला नीति असफल भइसकेको थियो।
विशाल भूभाग भएको भारतको हालका दिनमा कुनै पनि छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध छैन। यसले मोदीको छिमेकी नीति असफलताको कथा भन्छन्। २०७२ मा नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीपछि मोदीको वास्ताविक छिमेक नीति सतहमा आएको थियो। अहिले पनि नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध उच्च स्तरको छैन। भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेत समेटिएको नक्सा नेपालले जारी गरेर संविधानमा समावेस गरेपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले त्यसयता लगातार नेपाल विरोधी अभियान चलाइरहेका छन्।
उता भारतको अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँग पनि भारतको सम्बन्ध सुधार भएको छैन झन खराब अवस्थामा पुगेको छ। गएको जुन १५ मा गलवान उपत्यकामा भारतीय र चिनियाँ सेनाबीचको झडपमा २० जना भारतीय सैनिक मारिएपछि यी दुई छिमेकीबीच तनाव भइरहेको छ। यद्यपी पछिल्ला दिनहरुमा दुबै मुलुक सीमामा शान्ति कायम गर्न सहमत भएका छन्।
भारतमा चिनियाँ उत्पादनमाथि बहिस्कार गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ भने भारतीय सरकारले चिनियाँ कम्पनीले पाएका कैयौं ठक्का रद्द गरिदिएको छ। गलवान तनावका कारण भारत र चीनबीच व्यापारिक सम्बन्धमा पनि तनाव भएको बीबीसी हिन्दीले लेखेका छ। भारत र चीनबीच करिब ८२ अर्ब डलरको कारोबार हुने गर्छ।
उता भारतको दक्षिणी छिमेकी श्रीलंकासँग पनि भारतको सम्बन्ध हाल राम्रो देखिएको छैन। बीबीसीका अनुसार श्रीलंकाले भारतीय लगानीका प्रोजेक्ट स्थगित गरिदिएको छ। त्यसले पनि भारत र श्रीलंकाबीचको सम्बन्ध राम्रो नरहेको देखाएको बीबीसीले उल्लेख गरेका छ।
यस्तै जम्मू कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गरेपछि पाकिस्तानसँग भारतको सम्बन्ध थप चिसिएको छ। हालै पाकिस्ताको शेयर बजारमा भएको बम विस्फोटमा भारतको हात रहेको पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले बताएका थिए। भारत र पाकिस्तानबीच तत्काल शान्ति वार्ताको सम्भावनासमेत नरहेको बीबीसीले विश्लेषण गरेको छ।
उता नागरिकता कानुन संशोधन गरेपछि बंगलादेशसँग पनि भारतको सम्बन्ध ठिकठाक छैन। वंगलादेशका विदेशमन्त्रीले भारतको भ्रमणसमेत रद्द गरिदिएका थिए। यस्तै हालका दिनमा बंगलादेशबाट आयात हुने सामाग्री भारतले रोकिएदिएको बंगलादेशले जनाएको छ। आफ्ना सबै छिमेकीसँग भारतको सम्बन्ध राम्रो नदेखिनु मोदीको पहिला छिमेक नीति असफल भएको मान्न सकिने बीबीसीले विश्लेषण गरेको छ। (बीबीसी हिन्दीको सहयोगमा/डिसीनेपाल)
Previous Previous post: ट्रम्पले पहिलोपटक सार्वजनिक रुपमा मास्क लगाए
Next Next post: प्रेम सम्बन्धको हल्लापछि शाहको आयो यस्तो प्रतिक्रिया
गोर्खा सैनिक तुलबहादुर पुनको नाममा बेलायतमा रेल
भारतीय सेनामा नेपाली महिलाको भर्तीको मुद्दा किन भयो भाइरल? यस्ताे छ कारण
मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीमाथि आक्रमण
एनभी रमन्ना बने भारतको नयाँ प्रधानन्यायाधीश
जर्ज फ्लोइड हत्या : घाँटीमा घुँडाले थिच्ने प्रहरी हत्या अभियोगमा दोषी ठहर
डाइरेक्ट रिलिफले आज ३६ करोडको कोभिड नियन्त्रण सामग्री नेपाललाई सहयोग गर्दै